Karbonina: Ilay Singa Mahavariana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luvale Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Oromo Ourdou Pangasinan Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Hoy ny boky Zavatra Fototra ao Amin’ny Zavaboary (anglisy): “Ny karbonina no singa ilaina indrindra eo amin’ny fiainana.” Afaka mitambatambatra ny karbonina, na mitambatra amin’ny singa simika hafa ka ahazoana karazan-javatra an-tapitrisany. Mahita karazany vaovao foana ny manam-pahaizana, fa misy indray vokarin’izy ireo any amin’ny laboratoara.
Ho hitantsika ato fa manana endrika samihafa ny ataomana karbonina rehefa mitambatambatra. Misy, ohatra, miendrika rojo, piramida, peratra, takelaka, na fantsona. Mahavariana tokoa ny karbonina!
Miendrika piramida ny ataomana karbonina ao amin’ny diamondra. Lasa tsy mora miforitra àry ilay ataoma. Tsy mahagaga raha ny diamondra no hitan’ny manam-pahaizana hoe mafy indrindra amin’ireo zavatra vita nanahary. Tena tsara ny diamondra raha iray ihany ny molekiolana karbonina ao anatiny.
Mifampiraikitra tsara ireo ataomana karbonina ao amin’ny manjarano, ka lasa miendrika takelaka. Mifampitaingina toy ny antontan-taratasy ireo takelaka ireo nefa tsy mifampipetaka be. Ahavitana menaka ampiasaina amin’ny milina sy firamainty anaovana pensilihazo ny manjarano, noho izany toetoetrany izany. *
Miendrika takelaka iray ny ataomana karbonina ao amin’ny grafenina rehefa mitambatambatra. Hoatran’ny toho-tantely ny firafiny. Afaka mihenjana kokoa noho ny tsỳ (acier) ny grafenina. Ahitana grafenina kely ao amin’ny diana pensilihazo. Mety ho takelaka iray izany na maromaro.
Miendrika baolina na fantsona ny molekiolana karbonina ao amin’ny folerenina ary poakaty izy ireo. Faran’izay bitika ireo molekiola ireo, ka tsy hita raha tsy amin’ny mikraoskaopy.
Anisan’ny singa fototra ao amin’ny selan’ny zavamaniry sy ny biby ary ny olona ny karbonina. Ahitana azy io, ohatra, ny gliosida, tavy na jabora, ary asidra amine.
‘Ny toetran’Andriamanitra tsy hita maso dia hita amin’ny zavatra nataony.’—Romanina 1:20.
^ feh. 7 Jereo ilay lahatsoratra hoe “Mba Ampindramo Pensilihazo aza Fady!”, ao amin’ny Mifohaza! Jolay 2007.
Mamokatra Karbonina ny Kintana
Ivon’ny heliôma telo mitambatra no manome karbonina. Mino ny mpahay siansa fa ao anatin’ireo kintana atao hoe goavana mena izy ireo no mitambatra. Misy fepetra tsy maintsy feno tsara anefa vao mitranga izany. Hoy i Paul Davies, mpahay fizika: “Raha vao misy fiovana amin’ireny fepetra ireny [lalàna fizika], na kely fotsiny aza, dia tsy hisy izao rehetra izao, tsy hisy ny zavamananaina, indrindra fa ny olona.” Noho ny kisendrasendra àry ve no ahafahan’ny kintana mamokatra karbonina? Izany no eritreritry ny olona sasany. Ny hafa indray mino fa tsy ho nisy izany raha tsy teo ny Mpamorona hendry iray. Iza amin’ireo no hitanao hoe azo inoana kokoa?
Hizara Hizara Ilay Singa Mahavariana